Bran Castle | जान्नुहोस् यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सामान्य, के हेर्ने, रोमानिया
कुनै श doubt्का बिना मध्यकालीन महल तिनीहरू भेट्न लायकको केही चीज हुन्। धेरै हाम्रो समयमा आएका छन् तर सत्य मा, शताब्दीयौं मा धेरै धेरै गायब छन्। समय, बर्बाद, युद्ध वा साधारण उपेक्षाले ती मध्ये धेरैलाई मारेको छ।
तर केहि मानिसहरु पौराणिक कथा, ऐतिहासिक घटनाहरु र पर्यटन को लागी धन्यवाद बचाईएको छ। रोमानियामा, उदाहरणका लागि, त्यहाँ यिनीहरू थुप्रै पुराना किल्लाहरू छन् तर तपाईं संसारको मध्यकालीन महलहरूमा फेला पार्नुहुनेछ: Bran कैसल। उही हो र ड्र्याकुलाको महल? हो, ब्राम स्टोकरको उपन्यासबाट चरित्र।
1 जहाँ Bran कैसल छ
2 Bran Castle भ्रमण गर्नुहोस्
3 भ्रमणको बारेमा व्यावहारिक जानकारी
जहाँ Bran कैसल छ
यो भव्य महल यो रुकरको प्रवेशद्वारमा छ - ब्रान प्यासेज मार्गमा बदल्नुहोस् जुन ब्रासोभ र क्याम्पुलul्ग शहरहरू जोड्दछ। ल्यान्डस्केप पियट्रा क्राईलुइ र बुसेगी पहाडको अग्लो चुचुराहरूसँग सजाइएको छ।
ब्राण र ब्रासोभ बीचको दूरी kilometers० किलोमिटरभन्दा बढी हुँदैन ब्राण र बुखारेस्टको बीचमा २०० किलोमिटर भन्दा कम दूरी छ त्यसोभए तपाईं त्यहाँ छिटो जान सक्नुहुन्छ। महलमा भ्रमण भनेको पर्यटन मार्गको एक हिस्सा मात्र हो जुन क्षेत्रको प्रकृतिमा जोड दिनुपर्दछ, पहाडका दाँतहरू, जाडो बाहिरका हरियो जंगलहरू, मैदानहरू, खोलाहरू खोलाहरू खोलेर ...
तपाईं त्यहाँ कार, रेल, ट्याक्सी र बसमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ ब्रान क्यासलको आधिकारिक वेबसाइटको भ्रमण गर्नुभयो भने तपाइँले देख्नुहुनेछ कार द्वारा मार्गहरू Bran-Brasov र Bran-Bucharest नक्शामा। यसले प्रयोग गर्ने मार्गको संख्या, यात्रा गर्न किलोमिटर संख्या र यात्राको अनुमानित समय तोक्छ। यदि तपाईं ट्रेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईं बुर्डारेस्टबाट ब्रासोभ जानको लागि नोर्ड गाड़ा ए स्टेशनबाट राष्ट्रिय रेलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ट्रेन घण्टामा छुट्छ, इन्टरसिटी क्षेत्रीय सीएफआरमा, टिकट लगभग १० यूरो बढी वा कम खर्च हुन्छ र लगभग तीन दर घण्टा र आधा
ट्रेन केवल ब्रासोभमा आइपुग्छ र यहाँबाट तपाईंले बस वा ट्याक्सी लिनुपर्नेछ। Minutes 45 मिनेट भन्दा बढिमा तपाइँ ब्राानमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ नियमित बसहरू छन् हरेक आधा घण्टा र सप्ताहन्तमा हरेक घण्टा। टिकटको मूल्य १, .० यूरो छ। स्पष्ट रूपमा तपाईले ट्याक्सी दुवै ब्राँबाट महल र बुखारेस्टबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो केसमा, यात्रा साढे दुई घण्टाको छ र तपाईंले करीव 1०, around ० यूरो तिर्नु पर्छ। ब्रासोभबाट यात्रा सस्तो छ, करिब २० यूरो।
Bran Castle भ्रमण गर्नुहोस्
En उच्च मौसम (अप्रिल १ देखि सेप्टेम्बर from० सम्म), महलको समय सोमबार १२ देखि pm साँझ र म Tuesday्गलबारदेखि आइतवार बिहान 1 देखि साँझ 30 सम्म छ। अन्तिम प्रविष्टि साँझ 12 बजे छ। खुल्ला कम मौसम (अक्टोबर १ देखि मार्च from१ सम्म), दुई घण्टा अघि बन्द हुन्छ, अपराह्न 1 बजे।
महल २०० in मा पुनर्निर्मित खोलियो र उनीहरू ब्राानको गाउँसँगै यस क्षेत्रका पर्यटक बूमका पात्रहरू थिए जसले स्थानीय अर्थव्यवस्थाको विकासमा धेरै मद्दत गरे। सोउसेस्कु सरकारले सम्पत्ति जफत गरिसकेको थियो र नयाँ शताब्दीको सुरुसँगै धेरै परम्परागत रोमानियन परिवारहरूले आफ्नो फिर्तीको लागि राज्यलाई निवेदन दिए। त्यसपछि ब्रेन क्यासललाई हब्सबर्ग परिवारका सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरियो।
आज महल यो एक निजी संग्रहालय हो एक धनी संग कला र फर्नीचर को संग्रह क्वीन मरियमको सम्बन्धित। निरन्तर पुनर्स्थापनाको लागि धन्यवाद, महल आज यसको सबै वैभवमा चम्किन्छ। रानी मरियमले उनलाई "सानो किल्ला" भनेका छन त्यसैले यो वास्तवमै प्रभावकारी कुरा हो: कम्प्याक्ट, र्याम्प, टावर र भित्ताहरू सहित। सबै सुन्दर Carpathians द्वारा फ्रेम र स्पष्ट, ड्र्राकुला को दन्त्यकथा आफ्नो आभा निर्माण गर्न धेरै गर्छ।
यसको खुट्टामा भएको गाउँ पनिaको रूपमा कार्य गर्दछ आउटडोर संग्रहालय। यसले परम्परागत रोमा घरहरूको केही १ examples उदाहरणहरू प्रदर्शन गर्दछ, धेरै काठको बनेको, केही मिल मिल र अधिक। यो इतिहास को माध्यम बाट एक राम्रो पैदल छ।
हामीले यो भन्नु पर्छ कि महल वालाचियाको ऐतिहासिक शासकसँग सम्बन्धित छ त्यहाँ विश्वसनीय केहि छैन जुन Dracula महल संग एकजुट। उहाँ यहाँ कहिले कही जानुभएको हुनुपर्छ तर उनको भ्रमणको कुनै रेकर्ड छैन। र हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि ड्र्याकुलाका आयरिश लेखक ब्रम स्टोकरले मध्य युरोपमा वास्तवमै कहिल्यै कदम चालेनन र उनको चरित्रको सबै विकास काल्पनिक छ।
समाप्त गर्न म तपाईंलाई भन्छु कि तपाईं सक्नुहुन्छ ब्राउन कैसलमा हेलोवीन खर्च गर्नुहोस् र यो एक राम्रो विचार हो। भ्रमणलाई भ्लाड, इम्पेलेर लगाउने व्यक्तिले आदेश दिएका छन् र उही हो जसले तपाईंलाई यो पुरानो महल भित्र लग्यो जसले तपाईंलाई उसको विजय, लडाई र हो, शूलीकरणको बारेमा बताउँदछ। सबै भित्री प्लस आँगन जहाँ भोडका र वाइन दिइन्छ जबकि दूरीमा ब्वाँसोहरू चिच्याउन सकिन्छ।
थिमेटिक भ्रमण केही अधिक आधुनिक, एक प्रकारको संग समाप्त हुन्छ भोज पछि दुर्गको खुट्टामा स्थापित ठूलो तम्बूमा, ठाउँ हेलोवीन बसाउन गएका बाँकी मानिसहरूसँग साम्यकरणको लागि, त्यहाँका सबै पोशाकहरू। Werewolves, Draculae जताततै, रहस्यमय विधवाहरू र जे तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, यदि तपाईं अक्टोबरमा जानुहुन्न त्यहाँ अन्य घटनाहरू छन्तपाईंले भर्खर वेबसाइटमा हेर्नु पर्छ कुन कार्यक्रम निर्धारित गरिएको छ हेर्नका लागि।
उदाहरण को लागी, यी को लागी ईस्टर त्यहाँ एक घटना छ जुन मार्च १२ मा शुरू भयो र अप्रिल १th मा समाप्त हुनेछ। वा, अर्को घटना एक महान मल्टिमेडिया शोको साथ समयको तथाकथित टनेल हो।
भ्रमणको बारेमा व्यावहारिक जानकारी
टिकट लागत LEI LE० प्रति वयस्क30०, over 65 बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिको लागि, विद्यार्थीहरूको लागि २ 25 र स्कूलका विद्यार्थीहरूको लागि मात्र १०। अडियो गाईडहरू (अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, इटालियन, रसियन, हंगेरी र स्पेनिशमा) लेई १० र पछाडि लागत तपाइँ कुनै पनि प्रदर्शनमा प्रवेशको लागि अतिरिक्त भुक्तान गर्नुहुन्छ विशेष। उदाहरण को लागी, प्रति वयस्क यातना को एक्सपोजर को लागी 10 LEI अतिरिक्त।
La टिकट किन्नुहोस् तपाई यसलाई अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ सबै वर्ष।
चिया हाउस भ्रमण गर्न नबिर्सिनुहोस्, एक रमणीय र परिष्कृत भवन र यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने हेलोवीन भोज म तिमीलाई भन्दछु कि तपाई हतार गर्नुपर्नेछ किनकि यो लोकप्रिय समुद्र हो र तपाइँले कसरी लगाउने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्दछ। पार्टीले लोकप्रियताको रूपमा बढेको छ, यसमा विविधता आएको छ: आज यसले मध्यरात सम्म एक होरर टुर प्रदान गर्दछ जसको प्रति वयस्क एलईआई 70० खर्च हुन्छ र विशाल पार्टी जुन पछि सुरु हुन्छ र भोलमा समाप्त हुन्छ। पार्टी १ 18 बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिको लागि मात्र हो र यसको लागत १ LE० LEI छ, तर मूल्यमा महलको राती भ्रमण पनि समावेश छ।
र यदि तपाइँ खाना खान चाहनुहुन्छ भने, मेनू मूल्य 450० लेआई अधिक छ। डरलाग्दो यात्रा साढे at मा सुरू हुन्छ र भोज चाय हाउसको रेष्टुरेन्टमा pm बजे सुरू हुन्छ। तपाईंले भर्खरै भुक्तान गर्नुपर्नेछ र तपाईंको उत्तम पोशाक लगाउनु पर्छ। अविस्मरणीय !!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » Bran Castle चिन्नुहोस्